आइक्यानद्वारा डिसेम्बरमा लिइएको सिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित ! (नतिजासहित)
ARCHIVE, MUDRA MAMILA » आइक्यानद्वारा डिसेम्बरमा लिइएको सिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित ! (नतिजासहित)
काठमाडौँ- नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले गत डिसेम्बर महिनामा लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । केहि समयअघि आइक्यानले उक्त नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । आइक्यानको नतिजा हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् :